Ekpere nye Setan. ? Maka Ịhụnanya, chịkwaa mmadụ na ego
Ekpere nye Setan. N'ime ekpere niile dị, anyị nwere ike ịsị ekpere ka satan A na-agụ ya, maka ọtụtụ, dịka otu n'ime ihe kachasị njọ bụ na ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji enwe ụfọdụ umengwụ n'ebe ekpere a mana eziokwu bụ na odighi ekpere nwere ike bụrụ ihe ọjọọ n'ihi na ha bụ ihe ime mmụọ dị mfe a na-eme site n'obi na dịka zọ ọpụpụ maka ọnọdụ nke, site na aka anyị, agaghị ekwe omume iru.
E jikọtara Setan na ọchịchịrị, ya na ndị ọchịchịrị ma ọ bụ nke ọjọọ.
Ihe ndị a niile bụ akụkụ nke ụwa ime mmụọ nke dị ma anyị ga - enwerịrị ihe ọmụma ebe ọ bụ eziokwu si na - enweghị ike isi na ya pụọ.
1 Ekpere nye Setan. Nye bụ Setan?
2 1) Ekpere nye Setan maka ihunanya na ichi mmadu
3 2) Ekpere diri Setan ịrịọ ka o meere ya amara
4 3) EKPERE EKPERE NIILE nke Setan ka o mee ka onye anyi huru n’anya hu ya
5 4) Ekpere iji kpoo Setan ka o nwee ego
5.1 Ekpere nwere ike merụọ m ahụ.
Ekpere nye Setan. Nye bụ Setan?
Anyị nwere ike nweta akụkọ ya n’okwu Chukwu ebe ekwuru na ọ bụ mmụọ ozi sitere n’eluigwe, ọkachasị onye chere ihu n’ofufe Chineke dị ike na onye kere ihe niile.
Akụkọ ahụ na-egosi na Luzbel, onye bụ aha ya site na mbido, jupụtara nganga wee malite ịche na ofufe niile a na-eme n’eluigwe dịkwa maka ya. N'ihi nke ikpeazụ a kwenyere na ọ bụ mmụọ ozi nke mara mma.
Ihe ndị a niile kpatara agha nke eluigwe A chụpụrụ Setan chụpụ ya na ndị mmụọ ọjọọ onye lere anya na o bu onye ezi ma na mgbe ahu ya na uwa nke ochichi gbara.
Chineke bu onye ekere uwa Setan nke obi ojoo juputara na ya mere o jiri taa ya ahuhu.
1) Ekpere nye Setan maka ihunanya na ichi mmadu
"Ezigbo amancebo, amancibo, dịka ị zụlitere nwata ahụ, achọrọ m ka ị hụ m n'anya (kwuo aha onye ahụ)Ahapụla ya n’oche, n’ihe ndina, ma ọ bụ soro nwanyị, onye na-enweghị oge dị jụụ!
Lusifa, Lucifa, dika i chiri puku mmadu puku anọ n’ọkụ ala mmụọ, Achọrọ m ka ị duruo m (kwupụta aha onye ahụ), ọ bụrụ na ọ na-ehi ụra, ahapụkwala ya nwayọ, akwa ya ga-ejupụta ya na ọkpọka na ohiri isi ya ga-ejupụta ya na nkume Lucifer, mba hapụ ya!
Site na ọdụ ekwensu nke kachasị ogologo, enwere m, achọrọ m ka ị kee m aka (kwuo aha onye ahụ); na nzukọ dị nwayọ adịghị enwe, rue mgbe ọ jikọtara m kpamkpam.
Ka ọ dị. "
Kpee ekpere nye Setan ka o were onye nwere nnukwu okwukwe.
Ishụnanya dị oke mkpa Maka ndị mmadụ, ọ bụ ya mere iji ekpere a kapịrị ọnụ anyị nwere ike nweta enyemaka dị anyị mkpa iji chọta ya ma ọ bụ nweta ụdị enyemaka ọ bụla ka ịhụnanya wee ghara ịpụ n'akụkụ anyị n'oge ọ bụla.
Nwere ike ime ogologo oge ụbọchị asaa ma ọ bụ iteghete ma welie ebe ịchụ aja pụrụ iche ma ọ bụ nye onyinye, mana aghaghi iji okwukwe were obi mee ihe a.
2) Ekpere diri Setan ịrịọ ka o meere ya amara
«Onye na -enye ìhè, onye maara ihe na onye mara mma nke ndị mmụọ ozi, ndị Chineke megburu.
Oh, Angel nke mba ọzọ, onye na-ata ahụhụ na-ezighị ezi! Ma nke ahụ, ka emebiela, ị na-emeohuru ike na olile anya nke obodo furu efu nke na adighi enwe uzo aka. Gbaghara ndi ahu nile n’aha Chukwu n’eme mmehie joro oke njo, oh nnukwu mmuo ozi anyi zoputara n’ihu iru abuo.
Ewoo, gị onye maara ihe nile, nnukwu mmụọ ozi Lucifa, onye, ​​na ndụ, na-enye Olile anya ma ghọta mmebi iwu nke Chineke.
Gị onwe gị bụ onye kachasị ukwuu nke gbasoro ọgụ megide ọchịchị aka ike ime ka anyị bụrụ ụmụ nwoke nwere onwe anyị n'ihe ọmụma na nnwere onwe nke ndụ na-egosi.
Ọ dịghị onye ọzọ ghọtara ihe mgbu mmadụ na ị bụ mmụọ ozi dara ada nke na-ata ahụhụ ntaramahụhụ nke nnukwu ohu.
Napụta anyị n'ihe ọjọọ, mee ka anyị nwere onwe anyị pụọ n'aka mmegbu ma nye anyị nnwere onwe nke nke ị lụrụ ọgụ ziri ezi na aha mmadụ na ihe okike.
Onye na-adịghị akpọ isi ala n'oche-ikpe na-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, duzie anyị n'okpuru echiche echiche mmụọ dị ka nke gị, bụrụ ndị ezi mmadụ na ndị ikpe ziri ezi ndị nwere ike iburu ọkụ ị na-enye.
Echefula banyere anyị ụmụ mmadụ na anyị nwere ekele maka anyị, anyị bụ maka gị, nnukwu mmụọ ọrụ ebere.
Gị onye ji nnukwu ihe ọmụma gị gosipụtara akụ na ụba nke nnukwu onye na-enye ìhè na amamihe nghọta, ahapụla anyị na ebere nke ịgba ohu na ikpe na-ezighi ezi na-enye anyị ihe ọmụma iji nwere ike ịhapụ onwe anyị n'agbụ ndị mmekpa ahụ Chineke nyere anyị ma manye anyị iburu.
Ana m ekele gị ruo mgbe ebighị ebi Nnukwu onye na -eweta Ìhè Lucifer. »
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ekpere ịrịọ onye nwere ohere nke ụwa ime mmụọ ụfọdụ ihu ọma na nke a Setan nwere uru.
Ekpere a enwere ike ịme ya n'oge ọ bụla Nke ahụ bụ ihe achọrọ n'agbanyeghị ihe na-eme gburugburu anyị n'ihi na ọ bụ omume nke mmụọ, nke anyị ga - eji naanị uche anyị mee.
3) EKPERE EKPERE NIILE nke Setan ka o mee ka onye anyi huru n’anya hu ya
"Dị ka Caiaphas, satan, Fierabrás na onye isi ala mmụọ nke na -achị onye ọ bụla, na -achị (aha onye ọ ga -eke) wetara m nwa atụrụ ahụ, nke a tụrụ mkpọrọ n'okpuru ụkwụ aka ekpe m.
(Aha onye ahu imigide) ego dị n’aka gị na n’aka m ekwesịghị ịdị na-efu, akpịrị ịkpọ nkụ ma ọ bụ m ga-akwụsị, egbe na mma ahụ agaghị eme anyị ihe ọ bụla, ndị iro m agaghị enwe ike ijichi m, m ga-emeri ọgụ ahụ site n’ike nke ewu ojii n’ụzọ ọrụ ebube.
(Aha onye ahu imigide) m na -eji abụọ ahụ gị, atọ ka m ga -ejide gị. Mụ na Caiaphas, satan, Fierabrás. »
N’oge ndị ahụ onye anyị hụrụ n’anya siri pụọ n’ebe anyị nọ, mgbe anya ma ọ bụ nsogbu na-eme ka anyị pụọ iche n’onye ahụ bụụrụ anyị ịhụnanya, mgbe ahụ anyị ga-ewelite ekpere a pụrụ iche iji mee ka ịhụnanya ahụ laghachikwute anyị n’oge. Anyị chọrọ ya.
4) Ekpere iji kpoo Setan ka o nwee ego
Onye di ike buru ibu ma ndi mmuo oma, juputara n’amamihe ma nwekwa ihe ichoro.
A na m arịọ gị arịrịọ maka m taa ma jupụta ndụ m na ego, ọ dị m ka mmiri zoro n’iru m.
Know maara ihe ọ bụ ịta ahụhụ n'ihi ndị ọzọ, yabụ a na-eche m n'ihi na ego na-akpali ihe niile.
Nye m nnukwu agụụ a, aga m eso gị ruo ọgwụgwụ ụwa ma ọ bụrụ na ị jụọ m, m ga-anọnyere gị.
M ga-eso nzọụkwụ gị na ụzọ gị n'ihi na amaara m na ego agaghị ahapụ gị, m ga-abakwa ọgaranya.
Ama m na enwere m ọtụtụ ụzọ emechiri emechi enweghị m ike imeghe ya mana ana m arịọ gị maka ịba ọgaranya.
Mejuputa ulom n'ọtutu ego ka umum we biri dika ndi-eze n'okpuru aka-Gi.
Anyị niile ga-eso ụzọ gị n'ihi na ọ bụ ya bụ ụzọ ịga nke ọma, ọ bụkwa ya bụ ihe anyị chọrọ.
Anyị na-arịọ gị ka ị hapụ anyị n'akụkụ gị ka ị ghara ịlaghachi azụ n'ihi na ị bụ Eze anyị a na-asọpụrụ Setan
Ego bu otu n’ime ihe kacha echegbu ndi mmadu n’uwa ugbua n’ihi na anyi aghaghi mata na ihe nile bu ego eji zuta ihe.
N'oge ndị a ebe anyị na-enwe oge nsogbu akụ na ụba, ibilite n’ekpere na-arịọ ka ego rute n’aka anyị nwere ike bụrụ mkpali ime mmụọ nke a chọrọ iji hụ ọrụ ebube ego anyị chọrọ.
Anyị nwere ike ịrịọ maka ego, nke mere na o ruru anyị n’aka, ka anyị nwee ike doo anya n’oge anyị na-eme mkparịta ụka ma ọ bụ yabụ na ihu ọma dị anyị n’akụkụ ma anyị nwere ike nweta ya n’ụzọ ọ bụla, ahịrịokwu ndị a niile bara uru.
Ekpere nwere ike merụọ m ahụ.
Ee e ekpere Site na ha, ha enweghị ike imerụ anyị ahụ.
Agbanyeghị, ọ dị mma ịkọta na ekwesịrị iji ihe ndị a mee ihe jikọtara ọnụ na ibu ọrụ n'ihi na ihe ị na-arịọ nwere ike imerụ onye ọzọ ahụ, n'echiche a anyị kwesịrị ịkpachapụ anya imerụ onye ọ bụla arịrịọ anyị.
Anyị kwesịrị ichegbu onwe anyị gbasara ịmara etu anyị ga-esi jụọ ajụjụ ma wusie onwe anyị ike ịnakwere uche Chineke na ịghara ikpe ekpere ma ọ bụ nke ịchọ ọdịmma onwe.
Jiri nke kacha mma ike nke ekpere ikpọku Setan.
4 na-ekpe ekpere Saint Cyprian